Fanapotehana ny fampiasam-bola : herinandro sisa dia mety ho faty Ambatovy #canada #sherrit #ambatovy | NewsMada
Fanapotehana ny fampiasam-bola : herinandro sisa dia mety ho faty Ambatovy #canada #sherrit #ambatovy
Par Taratra sur 19/02/2016
Mihitsoka avokoa ny entana hafarana sy ny tokony haondran’ny Tetikasa Ambatovy ankehitriny, vokatry ny fanerena hampiharana ny hetra Advanced Cargo Declaration (ACD). Herinandro sisa ny fahafahan’ity orinasa vaventy ity miaina, ary ho faty tanteraka raha mitohy izao kenda roroka ataon’ny fanjakana izao.
Efa niaiky ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany fa tsy voakasik’ilay hetra Advanced Cargo Declaration (ACD) ny tetikasa Ambatovy satria fehezin’ny lalàna LGIM. Mazava anefa ny voafaritry ny LGIM fa manana antoka tsy hikitihana ny hetra aloany sy ny lalàna mifehy azy Ambatovy.
Miziriziry mampihatra azy ihany anefa ny fanjakana amin’ny alalan’ny Antokon-draharaha misahana ny seranan-tsambo sy ny fitaterana anaty rano (APMF), ary nanome baiko ny kaompania tompon’ny sambo. Nanambara, omaly ny filoha lefitry ny fampandrosoana maharitra ao amin’ity orinasa ity, Louis Roland – Gosselin, fa mihitsoka avokoa ny akora fototra hafarany avy any ivelany, sy ny vokatra tokony haondrana. Vokany, tsy misy ny fidiram-bolan’ity orinasa ity, ka tsy afaka hiaina intsony, afaka herinandro, raha mitohy izao tranga izao.
Amin’izao bemarenina ataon’ny tompon’andraiki-panjakana sasany izao, nangataka fihaonana maika amin’ny filoham-pirenena ny Tetikasa Ambatovy. Takin’izy ireo koa ny hampiharana sy hanarahana ny lalàna. Efa manaraka akaiky ity tranga ity ny mpanjifan’Ambatovy, ary mety hividy any amin’ny firenen-kafa raha tsy mivaha ny olana.
Manara-maso akaiky ny Vondrona iraisam-pirenena
Tandindomin-doza tanteraka ny tontolon’ny fampiasam-bola, indrindra ny vahiny (IDE) eto Madagasikara. Mahatonga izany ny fanapahan-kevitra tsy voahevitra sy ny tery vaimanta ataon’ny fanjakana. Azo antoka, fa mijery akaiky ity raharaha ity ireo mpiara-miombon’antoka mpamatsy vola an’Ambatovy, sady mifandray mivantana amin’ny vondrona iraisam-pirenana, toy ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI), ohatra. Ity farany anefa, nametraka fepetra amin’ny fomba fitantanam-panjakana sy ny fametrahana ny fanjakana tan-dalàna. Hanadihady ny ezaka vitan’ny fanjakana rahateo ny FMI amin’ny faran’ny volana marsa.
Raha hikatona ny orinasa, ho very ny asa aman’aliny. Vokatra voalohany fanondran’i Madagasikara ny nikela ny taona 2014, mampidi-vola vahiny ho an’ny fanjakana. Sa karohina ny hampihen-danja ny Ariary?
Tsikaritra ho manao bemarenina ny fanjakana hanerena hampiharana ity ACD ity. Toa tsy sahy mandray fepetra ny governemanta manoloana ny fiziriziriana ataon’ny tompon’andraikitra sasany, mikaroka tombontsoa manokana amin’io hetra io. Midika ve ireo fa tena tsy mahafantatra ity raharaha ity tokoa ny filoham-pirenena? Sa misy ireo mpanipy hoditr’akondro, mba tsy hahalany azy indray amin’ny taona 2018?